Ukuba intetho yekholeji iyinxalenye yenkqubo yokwenza isicelo, kunokuba kuyilingo lokudlula ithuba. Mhlawumbi awukho ithemba kwi-intanethi yakho, okanye mhlawumbi udliwano-ndlebe lubonakala lufana nokulahleka okungadingekile. Ezi zixhalaba ngokusemthethweni. Uxakekile. Ukufaka isicelo kwiikholeji kukukhathazayo. Kutheni ufanele udale umsebenzi omningi kunye noxinzelelo ngakumbi ngokwakho ngokusebenzisa intetho yodliwano-ndlebe xa ungenayo?
Kutheni ungayeki nje?
Kwiimeko ezininzi, nangona kunjalo, ungcono ukwenza intetho yodliwano-ndlebe. Kwimeko ezininzi udliwano-ndlebe luye lungcono kunokuba lwenze ingozi.
Izizathu zokwenza iNgxowa-ndlebe yeKholeji
Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni ufanele usebenzise ithuba lokuba udliwano-ndlebe kunye neekholeji unomdla wokuya kuzo:
Ukukhetha udliwano-ndlebe kubonisa umdla wakho . Umfundi ofaka iikholeji ezingama-50 ezingafunekiyo akayi kuphazamisana nodliwano-ndlebe. Xa uthatha ixesha lokudibana nommeli ekholeji, wenza ingxelo yokuba umdla wakho unyanisekileyo kwaye ufuna ukufunda okwengeziwe ngesikolo. Kwakhona, iikholeji ifuna ukuvuma abafundi abaya kwamkela isipho sabo, kwaye isigqibo sakho soodliwano-ndlebe senza ukuba kubekho ukhuseleko olukhuselekileyo. Ngamafutshane, udliwano-ndlebe yindlela yokubonisa umdla wakho , umbandela ogqithisileyo kwiikholeji ezininzi kwinkqubo yokungena.
Udliwano-ndlebe kukuvumela ukuba ufunde kabanzi. Ukukhangela ngempumelelo kwikholejini akukhona ngokungena kwisikolo esihle kakhulu, kodwa ukungena esikolweni okulungileyo kuwe. Udliwano-ndlebe lunethuba elihle lokuba ufunde kabanzi ngekholejini kwaye ufumane ukuba ngaba ngumdlalo omhle wobuntu bakho kunye nomdla. Udliwano-ndlebe uza kudla ukunika ithuba lokubuza imibuzo , ngoko qi ni sekisa ukuba usebenzisa eli thuba.
Udliwano-ndlebe luvumela ikholejini ukubeka ubuso kumanani. Zibeke ezicathulweni zabantu abamkelweyo. Baneliqela leempendulo kunye neemvavanyo zokuvavanya ezisetyenziselwa ukwenza izigqibo zokungeniswa. Ukuba badibana nawe, uya kuba ngaphezu kwamanani. Zonke iikholeji ezikhethileyo ziyakwamkelwa ngokupheleleyo , ngoko sebenzisa udliwano-ndlebe lwakho ukuba upende umfanekiso ocebileyo wobuntu bakho kunye nokuthanda. Ezinye iinkalo zobuntu bakho nezinto ezinqwenelekayo kunzima ukuzityhila kwisicelo esibhaliweyo, kodwa udliwano-ndlebe unokubakhokelela.
Izizathu ezimbalwa zokungenzi uVavanyo oluKhethekileyo
Iindleko . Ukuba iikholejini ayinabo abamele imimandla kwaye isikolo sikude, i-interview-campus ingabakho imali engama-$ 1,000 (okanye ngaphezulu) ngeethikithi zendiza, iihotele kunye nezinye iindleko. Kwiimeko ezinjalo, kunengqiqo ekugqibeleni udliwano-ndlebe. Kwimeko enjalo, ke, ungazama ukumisa incoko yefoni okanye udliwano-ngxoxo lwe-Skype.
Ngokuqinisekileyo awuyi kuzibonakalisa kakuhle . Ukuba unenene, ngokwenene ungumnxibelelwano onobuhlungu, unokufuna ukugcina loo nto ifihlwe kwiikholeji. Ukuba nexhala malunga nodliwano-ndlebe akusikho isizathu sokunqumla udliwano-ndlebe-abafundi abaninzi banentloni, kwaye iikholeji ziqonda oku. Kodwa ukuba abantu bayathanda ukukuthanda emva kokuba badibene nawe, unokufuna ukuvumela umsebenzi wakho obhaliweyo uthethe ngawo. Le meko ivame ukuba yinyani engqondweni yabo kubafundi.
Awukwenzi umsebenzi wakho wesikolo. Ngaphambi kokuba udliwano-ndlebe, kufuneka uhlale uqhuba imibuzo eqhelekileyo yodliwano ndlebe , kwaye kufuneka ucinge ngesikolo. Ukuba ubonisa ukuba awukwazi nto ngeekholeji kwaye awukulungele ukuba uphendule imibuzo engundoqo, uya kuba ngcono ukuhlala ekhaya.
ILizwi lokugqibela malunga neeNtetho zengxoxo
Ngokuqhelekileyo, kukuxhamla ukuba udliwano-ndlebe. Uya kuba nolwazi olungcono xa wenza izigqibo ezibalulekileyo malunga nokukhetha ikholeji, kwaye abantu abamkelekileyo baya kuba banomdla ngakumbi kwi-kholeji yabo. Gcina ukhumbule ukuba ukhetho lwekholeji ngokuzibophelela kweminyaka emine, kwaye lichaphazela ubomi bakho bonke. Udliwano-ndlebe luvumela ukuba wena kunye nekholejini ukuba wenze isigqibo esinolwazi, kwaye mhlawumbi kuphucula amathuba akho okuvunyelwa kwinkqubo.
IMfazwe yaseMexico naseMelika 101
Ngoobani ii Brahmins?
Ukusebenzisa iilebula kwi-Excel 2003 Iifomula kunye neMisebenzi
Imbali emfutshane yeRenminbi (iYinan Yuan)
I-McDonald's French Fries Ayikayiyo imifuno